मन्त्री छान्ने जिम्मा माधव नेपालले पाए, को -को बन्दैछन् मन्त्री ? – GALAXY
मन्त्री छान्ने जिम्मा माधव नेपालले पाए, को -को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका छन् । आज बसेको बैठकले संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष नेपाललाई दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष नेपाललाई नै चयन गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सांसदसमेत रहेका नेता विरोध खतिवडाले मन्त्री छान्ने जिम्मा बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई दिएको जानकारी दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बैठकले बाढीपहिरोबाट पीडित भएकाहरूलाई उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।